Dr. Fiqi ?dakhaatiirtii la laayey nooca takhasuskooda dadku aad buu ugu baahna xiligan? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 24, 2013 3:27 b 0
Muqdisho,december 24, 2013 – Maamulka cisbitalka Fiqi ee deegaanka Siinka-dheer ayaa ka hadlay mar kale dhakhaatiirtii Ajinebiga ahaa ee dhowaan lagu laayey deegaankaas, iyo raadka ay ku reebayso dadka rayidka ah.
Dr. Cismaan Cabdiraxmaan Fiqi oo ah maamulka Cisbitalka Fiqi ee deegaanka Siinka-dheer waxaa uu sheegay in dakhaatiirtii Syrian-ka ahaa ee dhowaan la laayey qaybtood in aan takhasuskooda oo kale laga helayn gudaha Soomaaliya, isla markaasna dadku u baahnaa.
Wuxuu tilmaamay in faa?iido badan oo shacabku ka heli lahaa cilmiga dakhaatiirtaas ay meesha ka baxday oo ay wax wayn u dhimayso rajada rayidka iyo dadka u baahnaa in ay u tagaan dakhaatiirta la lalaayey.
Docda kale, ?Dr. Fiqi wuxuu ka hadlay hadii ay jirto cid lagu tuhmayo dilka dakhaatiirta oo ay iyagu la socdaan, wuxuuse sheegay inaysan waxba ka ogayn arintaas oo ay ka war sugayaan laamaha amaanka dowladda soomaaliya oo baarista wada.
Dhamadkii toddobaadkii hore ayey dalka isaga ??bexeen dakhaatiir u dhashay Syira oo saaxiib dhow la ahaa ragii lagu laayey deegaanka Siinka-dheer ee duleedka Muqdisho, sidoo kale waxaa ku jiray dakhaatiirta dalka ka baxay kuwa dhaawacmay oo iyagana la socday kuwa la weeraray.
Dhegeyso: – Cabdulaahi Suldaan oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Dr. Cabdiraxmaan Fiqi